निरन्तर लागिरहने मानिसले जे ऊ चाहन्छ त्यो पाउन सक्छ श्रीमद्भगवद गीता:: Naya Nepal
निरन्तर लागिरहने मानिसले जे ऊ चाहन्छ त्यो पाउन सक्छ श्रीमद्भगवद गीता
गीतालाई हिन्दू धर्म दर्शनमा मात्र होइन विश्व व्यापीरुपमा विशेष महत्व दिइन्छ । महाभारत युद्धका क्रममा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको तत्व ज्ञान नै गीता हो त्यसैले हिन्दू धर्मवालम्वीहरुका लागि गीताको विशेष महत्व रहन्छ । उनीहरु गीताको पाठ गर्ने मात्र नभइ श्रद्धा
भक्तिका साथ पूजा आरधाना पनि गर्ने गर्दछन् । यहाँ गीताका अनमोल वचनहरु उल्लेख गरिएको छ जुन भनाइ तपाईंको जीवनका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् । यदी मनलाई आफ्नो वसमा राख्न सकिएन भने यसले तपाईं आफैं विरुद्ध शत्रुको व्यवहार गर्दछ यदी विश्वासका साथ निरन्तर लागि रहन्छ भने हरेक व्यक्ति जे ऊ चाहन्छ त्यो पाउन सक्छ ।मानिस आफ्नो विश्वासद्वारा निर्माण हुन्छ, ऊ जस्तो विश्वास गर्दछ, उस्तै बन्दछ ।केवल मन मात्र कसैको मित्र वा शत्रु हुन्छ बाँकी सबै भ्रम मात्र हो नरकका तीन द्वार छन् – क्रोध, वासना र लोभ । तपाईंलाई कर्मको फलको कुनै इच्छा नै छैन भने कर्मले कुनैपनि हालतमा बाध्न सक्दैन । जसले आफ्नो काममा आनन्द मान्द छ, तिनीहरूले नै कार्यमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छन् । शंका गर्ने व्यक्तिको लागि न त यस संसारमा शान्ति मिल्छ न त बाहिर नै ।
मनोकामना पूरा गरिदिनेढोर बाराही देवीकोयस्तो छ महिमाबाराही देवीमन्दिरमा जे माग्यो त्यही पुरा हुने।
मनोकामना पूरा गरिदिने देवीका रूपमा प्रख्यात छिन् ढोर बाराही। शुक्लागण्डकी नदी पर्तिर खोंचमा हरियाली वातावरणमा एउटा कलात्मक मन्दिर छ ढोर बाराही। चौबीसे राज्यमा पर्ने ढोर राज्यकी देवी भएकाले ढोर बाराही भनिएको। मन्दिर शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–९ मा पर्दछ।ढोर बाराहीको भाकल गरेमा मनले चि’ताएको पूरा हुने जनविश्वास छ।उनलाई सम्झेर कोही सन्तान माग्छन् त कोही कोही धनसम्पत्ति अनि कोही सुस्वास्थ्यको कामना गर्छन्। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा भएपछि उनीहरू पाठा वा पाठी ल्याएर मन्दिरमा ब’लि चढाउँछन्। पुजारी चिरञ्जीवी लम्सालका अनुसार विशेषतः स्याङ्जा, कास्की र तनहुँका ति’र्थालु आउँछन्। मन्दिरसँगै स्या’नो पोखरी छ। पोखरीमा माछा छन्। त्यही पोखरीमा रहेको शिलढुंगामा ब’लि दिइन्छ।
अ’नौठो कुरा के छ भने पोखरीमा बेलाबेलामा पानी घ’टबढ भैरहन्छ। पानी ब’ढ्नुलाई लहरी च’ल्नु भनिन्छ। लहरी चल्ने बेला माछाले सं’केत पाउँछन्। उनीहरू पानीको मुखतिर थु’प्रिन्छन्। आधा वा एक घन्टाको फरकमा ल’हरी चल्छ। अनि एकछिनमा पानी क’म भैहाल्छ।लम्साल थरका बाहुन मन्दिरका पुजारी। उनीहरू भक्तजनले च’ढाएको भे’टीबाट गु’जारा चलाउँछन्।मन्दिर कति पुरानो हो भन्ने एकिन छैन। दुई दशक अघिसम्म ढुंगा र माटोले बनेको मन्दिरमा खरले छाइएको हुन्थ्यो। पचासको दशकमा ढलान गरेर तामाको छाना राखियो। ढोर बाराही मन्दिर सं’रक्षण स’मितिका अध्यक्ष एवं वडाध्यक्ष लोकनारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्दिरमा नेपाल संवत ९६७ लेखिएको घन्टा सु’रक्षित छ।अरू प्राचीन घन्ट पनि छन्। मन्दिर क्षेत्रमा फूलप्रसादी र खाना बेच्ने पसल थुप्रै छन्। दुलेगौंडा बजारबाट पश्चिम ५ किमि दूरीमा ढोर बराही मन्दिर छ। दुलेगौंडाबाट रि’र्जभ्ड जिपमा मन्दिर पुग्न सकिन्छ
धेरै चिया पिउनुहुन्छ तपाईंका लागि खुसीको खबर छ
! के तपाईं पनि त्यस्तै एक व्यक्ति हो, जसलाई चिया नभइ हुँदैन ? अर्थात् चिया धेरै पिउने गर्नुहुन्छ ? प्रायजसो चिया धेरै पिउने मान्छेलाई सल्लाह दिने गरिन्छ कि धेरै चिया पियो भने बिमार भइन्छ, कम गर ! तर, यहाँ हामीले चिया पिउने व्यक्तिका लागि खुसीको समाचार लिएर आएका छौं ।